अर्थ सरोकारको समाचारपछी यसरी पल्टियो पासा, सीताराम थपलिया नेप्सेमा नदोहोरिने निश्चित !
ARCHIVE, MARKET WATCH, SHARE MARKET » अर्थ सरोकारको समाचारपछी यसरी पल्टियो पासा, सीताराम थपलिया नेप्सेमा नदोहोरिने निश्चित !
नेप्सेका महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया नेप्सेमा नदोहोरिने निश्चित भएको छ । थपलियाले नेप्सेमा पुन: महाप्रबन्धकको पदमा नियुक्त हुन पोलिटिकल लविङ गरेको खबर अर्थ सरोकार डटकमले ब्रेक गरेपछि उनको काम चित्त नबुझेका लगानीकर्ताहरुले समेत आफ्नो राजनीतिक पहुँचको प्रयोग गर्दा उनी महाप्रबन्धकको पदमा दोहोरिने सम्भावना टुंगिएको हो ।
'अर्थ सरोकारले सीताराम थपलिया पुन: नेप्सेमा दोहोरिंदैछन् भन्ने खबर सार्वजनिक गरेपछि हामीलेपनि पोलिटिकल लाविङ गर्यौं । त्यसपछि उनी अव नेप्सेमा नदोहोरीने पक्कापक्की भएको छ ।' स्रोतले भन्यो, 'अव नेप्सेको महाप्रबन्धकमा सीताराम थपलिया आउने कुनैपनि सम्भावना छैन ।'
महाप्रबन्धक थपलियाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनको कार्यकाल एक बर्षका लागि थप गराउन उनी ठुलै लाविङमा लागेको खुलासा भएपछि यस सम्बन्धमा अर्थ सरोकार डटकमले समाचार ब्रेक गरेको थियो ।
प्रकाशित : Monday, May 22, 2017